Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay qarixii lala beegsaday Shaqaalaha Turkiga - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay qarixii lala beegsaday Shaqaalaha Turkiga
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa si xooggan u cambaareysay kana tacsiyeeysay dadkii ku dhintay qarixii lala beegsaday muwaadiniin Soomaali iyo Turki ah oo ka shaqeynayay dhismaha waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye.
Qaraxa oo ahaa qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa Maanta Barqadii waxaa uu ka dhacay inta u dhaxeysa degaannada Xaawa Cabdi iyo lafoole, waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimuu ayaa sheegay in Xukuumadda ay ka go’antahay sii wadista dhismaha jidkan muhiimka ah, isagoo shacabka ugu baaqay in ay dhinac uga soo wada jeestaan la dagaallanka waxa loogu hero argagixisada nabadda iyo horumarka diidan.
Dowladda Turkiga oo dhankeeda ka hadashay qaraxa ayaa sheegtay inay ku dhinteen Afar Ruux oo uu kujiro Muwaadi and Turkish, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen Afar Turkish ah.
Previous articleWarmurtiyeed xasaasi ah oo laga soo saaray shirka Garoowe
Next articleGuddoomiyihii Maxkamadda Sare ee Ciidamada oo xilkii laga qaaday & mid Cusub oo la magacaabay